★မြန်မာ့အလင်း★: Global Warming Propaganda
မီးခိုးတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီးအပူရှိန်တက်ပြီး. . ရေခဲတွေအရည်ပျော်လို့ ကျွန်းတွေ မြုပ်တော့မယ်. . ဆူနာမိတွေ ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်တော့မယ်. . လေမုန်တိုင်းတွေ အဆက်မပြတ်ဖြစ်တော့မယ် စသဖြင့် စသဖြင့် ကျုပ်တို့ကို. . ကြောက်အောင်ဖြဲခြောက်၊ လန့်အောင်ဖြဲချောက်တယ်။ ကင်ဆာရောဂါတွေလည်း ရတော့မယ်တဲ့။ အဲဒါတွေမဖြစ်ဖို့ အစိုးရတွေက လုပ်သင့်တာလုပ်ရန် ကုန်ကျစားရိတ်များအတွက်သုံးဖို့ အခွန်ငွေတွေ တိုးကောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုပဲ။ ထို့အတူပဲ ကားတွေ၊ စက်ရုံတွေအပေါ်မှာ မီးခိုးထွက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စည်းကမ်းဥပဒေတွေအသစ်တွေထုတ်ကာ လိုအပ်သလို ဒဏ်ကြေးတွေတိုးမြှင့် ကောက်ခံပါတယ်။ ကျုပ်တို့ကလည်း အဲလို အခွန်တိုးကောက်တာကို ကျေးဇူးတင်နေကြတယ်မဟုတ်လား? သူတို့ ပိုက်ဆံရဖို့ ဒဏ်ငွေတွေတိုးကောက်တော့လည်း ကျေးဇူးတင်နေတယ်မဟုတ်လား? အဲလိုကျေးဇူးတင်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင် မီဒီယာတွေက propaganda တွေကို ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းလို့ ဖြစ်တယ်။ အခုတော့ အခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့ ပစ္စည်းတွေဈေးတက်ကုန်ပြီ။ အစိုးရဆိုတာ ငွေရှာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်ကိုနာမည်အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ကောက်ခံတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရင်းစီးပွားရှာနေကြတာပါ။ (အမေရိကန် အစိုးရတွေဟာ နအဖကို ဒီမိုကရေစီပေးဖို့သာ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘယ်တုံးကမှ ပြည်သူလူထုအပေါ် မတရားသဖြင့် အခွန်တွေ ဖြစ်ညှစ်ကောက်နေတာ ၇ပ်တန့်ဖို့ လုံးဝ မတောင်းဆိုပါဘူး)
ငွေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် လမ်းတံတားဖေါက်တယ်ဆိုတဲ့ ကလေးတွေသာ နှစ်သက်မယ့်စကားတွေယုံဆဲလား? ဒီမိုမီဒီယာတွေနဲ့ အတူတူ နအဖမီဒီယာတွေက Global Warming မှာ အသံကအတူတူ ဘာကြောင့်ထွက်နေရသလဲဆိုတာ . . . မိမိဖာသာစဉ်းစားအဖြေရှာပါ။